Gabdho SHIDAN oo la dhashay Riyad Mahrez oo Beerka laga xashiriyay….(Sidee wax u dheceen?) - Hargeele - Wararka Somali State
Gabdho SHIDAN oo la dhashay Riyad Mahrez oo Beerka laga xashiriyay….(Sidee wax u dheceen?)
(Paris) 15 Sebt 2020. Labo gabdhood oo la dhashay weeraryahanka Kooxda Manchester City ee Riyad Mahrez ayaa waxaa garaacay burcad la soo kireystay xilli ay ku sugnaayeen dukaankooda lagu iibiyo waxyaabaha ay Dumarku isku ku qurxiyaan kaas oo ku yaala magaalada Paris ee caasimadda Waddanka Faransiiska.
Dounya iyo Ines ayaa waxaa rabshadahaas ka soo gaaray dhaawacyo fudud xilli shaqaalaha kale lagala daalay feer iyo faralaab.
Rabshada ayaa bilaabatay kaddib markii ay haweeney dukaanka ka iibsatay waxyaabaha la isku qurxiyo kaddibna ay diiday inay lacagta bixiso iyadoona u yeeratay rag burcad ah.
Barcada oo tiradoodu gaareysay ilaa 12 ayaa waxay bur-buriyeen waxyaabihii la isku qurxinayay ee dukaanka yiilay.
Dounya oo ceego (Ceeji) lagu dhagay ayaa sheegtay in burcada laga yaabo inay iyagu bartilmaameedsanayeen maadaama uu la dhashay Riyad Mahrez.
“Dhamman waan naxnay oo shoognay waxna way na gaareen, ma garanayo sababta ay tani u dhacday waxaase laga yaabaa inay tahay Mahrez bay la dhasheen dartood,”.
Dounya oo hadalkeeda sii wadatay ayaa tiri: “Daqiiqado yar kaddib saddex baabuur ayaa timid dukaankeenna, waxaana ka soo dagtay nimanka burcada ah waxayna bilaabeen inay na weeraraan.
“Way qeylinayeen qof kasta ayayna caynayeen. Alaabta ayay dhulka nooga tuureen waxayna u dhaqmayeen si arxan darro ah, midbaa isku dayay inuu ceego igu dhago halka mid kalena uu lugta ka laaday walaashey iga yar.
“Walaashey iyo aniga subax kasta ayaan soo kalahnaa si aan shaqada u nimaano, si adag ayaan u shaqeynaa waxaan mudanahay in nala tixgaliyo.”
Lama garanayo ilaa iyo hadda in burcadii weerarka soo qaaday ay Dukaanka wax ka dheceen iyo inkale.
Somali American farmer seeks to help others get started – West Central Tribune
Miyeey Liverpool awoodaa inay difaacato horyaalka Premier League? – Fernando Torres ayaa ka jawaabaya
“Klopp wuxuu ku socdaa wadadii Sir Alex Ferguson” – Xiddig hore Man United ah
Frenkie de Jong oo shaaca ka qaaday farqiga u dhexeeya Quique Setién iyo Ernesto Valverde